မမှီလျှင်မလှမ်းနဲ့ စိတ်မောရတာ အဖတ်တင်မယ် (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မမှီလျှင်မလှမ်းနဲ့ စိတ်မောရတာ အဖတ်တင်မယ် (၁)
မမှီလျှင်မလှမ်းနဲ့ စိတ်မောရတာ အဖတ်တင်မယ် (၁)
Posted by etone on Oct 27, 2011 in My Dear Diary | 30 comments
ဘကြီး FR တို့ … ကိုချောကလက်ကြီးတို့ရဲ့ ဒီရက်ပိုင်း ပို့စ်တွေကိုဖတ်ပြီး …etone လည်း ပို့စ်တစ်ခုဖတ်ရာက ကော့မန့်ရေးလျှင် ရှည်နေမှာမို့ .. ( ခေတ်မှီအောင် ) ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပဲ တင်လိုက်ရပါတော့တယ် … ။
ညီမ nikita ရေးတဲ့ မြင်တွေ့နေရသော ဘ၀အစိတ်အပိုင်းများပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး … ဆွေးနွေးချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် စာပြန်ရေးလိုက်ပါတယ် … ။ သူ့မရဲ့ ပို့စ်ထဲမှာရေးသားထားတာကတော့ … အခြေခံ လူတန်းစားတွေရဲ့ ဘ၀ကို စာနာထောက်ထားပြီး ပညာတတ်ထက် ငွေကြေးနောက်လိုက်နေရတဲ့ အကြောင်းကို ရေးသားထားခဲ့တာပါ … ။ အထူးသဖြင့် …. သူမနေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်မှုကို သူမဧ။် ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးဖြင့် မြင်ရတဲ့ ရှူထောင့်က ဝေဖန်ရေးပြထားတာပါ .. ။
အခြေခံလူတန်းစားလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ …. ကျွန်မတို့ စိတ်ထဲ ပြေးမြင်မိတာ ….. စာမတတ်ပေမတတ် …. စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမများနှင့် … ကာယကိုအသုံးပြုပြီး ထမ်းပိုးနေတဲ့ ကုန်ထမ်းသမားတွေပါပဲ …. ။ ယခင်ကတော့ ကျွန်မလည်း nikita နီးတူ အတွေးမျိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် … အခြေခံ လူတန်းစားဆိုကတည်းက ဘာမှ မတွေးပဲ အရာရာ နိမ့်ကျသူလို့ ထင်မှတ်ပြီး ရောယောင် သနားမိ နေတာပါပဲ … ။ သေချာ ဂဃနဏသိချိန်မှာတော့ … ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ သနားမိပါတော့တယ် …
တကယ်တမ်း အခြေခံ လူတန်းစားတွေထဲမှာမှ … မကြုံဖူးလျှင် ယုံလောက်စရာမရှိတဲ့ လူတွေ အလုပ်ဝင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ အံ့သြ၀မ်းသာစွာနဲ့ သိလိုက်ရပါတယ် … ။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံက အလုပ်သမ အများစုကတော့ …. အစိုးရ အသိမှတ်ပြု အတန်းပညာ မတတ်သူ များပါတယ် …. ။ မတတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ …. စာတလုံးမှ မဖတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး … မူလတန်း ၊ အလယ်တန်း စသည်ဖြင့် သေစာရှင်သာ ဖတ်တတ်သူများသာ …… အများစု ပါပါတယ် …. ။ နယ်မှ လာသူများဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ဆွေမျိုးရင်းချာ နေစရာမရှိလျှင် အဆောင်ငှားပြီးနေကြပါတယ် ….။ အတန်းပညာကို တစ်ဝက်တစ်ပြတ်သင်ပြီး စီးပွားရေး ရုန်းကန်ဖို့ အတွက် အလုပ်လာလုပ်သူတွေ … အင်္ဂလိပ်နံပါတ် ၊ မြန်မာဂဏန်းတွေတော့ ကျွမ်းကျင်စွာ တက်မြောက်ပါသေးတယ် …. ။ ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်တိုင်း နံပါတ်စဉ်နဲ့လည်ပတ်နေတာကြောင့် မူလတန်းထိပဲ တက်ခဲ့ရသည်ဆိုဦးတော့ … သူတို့နံပါတ်ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်ပါသေးတယ် …..။ ပြန်မပြောတတ်သာရှိမယ် ….. အလုပ်ကနေ အကြားသင်ရင်း … စက်ရုံထဲ အတူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားရဲ့ instruction အတိုင်း အပြည့်ဝလိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ် …. ။ မယောင်ရာဆီလူး သင်တန်းတက်တဲ့ လူငယ်တွေတောင် နိုင်ငံခြားသားက လမ်းမသိလို့ မေးရင် …. ပြန်ပြောဖို့ တွန့် ဆုတ်နေတာမျိုး လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ညွှန်တာမျိုးတွေ တွေ့နေရတဲ့ အချိန် …သူတို့လေးတွေ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်အတူလုပ်နိုင်တာ ကျွန်မကတော့ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမိတယ် ….။.
နောက်တစ်ချက် … သူတို့ … သူမတို့ အလုပ်ချိန် နားရက် နည်းပါးပါတယ် … ဒါပေမယ့်လည်း သူမတို့ ကျေနပ်ကြတယ် … အချိန်ပိုဝင်ငွေရနေခြင်းကြောင့်ပါ … နယ်မှလာသူ အများစု ဖြစ်တာကြောင့် … အထွေထူးထူး လည်ပတ်စရာလည်းမရှိကြပါ … ။ ဒါ့ပြင် အဆောင်နေ လူရေ ထူထပ်တာကြောင့် … အဆောင်မှာနေတဲ့ အချိန် သက်သက်သာသာ နေရာတာထက် အနေကြပ်ပြီး ကသိကအောက်များတာကြောင့် …. အလုပ်စောဆင်းပေးမှာတောင် စိုးရိမ်နေတတ်ကြသေးတယ် …. ။ ဘယ်လောက်နည်းပါးတဲ့ အချိန်ပိုဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါစေ … သူမတို့ အချိန်ပိုဆင်းတဲ့ နာရီပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ် … ။ အချိန်ပိုဆင်းချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး စက်ရုံပိုင်းမှ မုန့်ကျွေးတာမျိုး ၊ ထမင်းကျွေးတာမျိုး လုပ်ပေးတဲ့အတွက် အိမ်မှာ ချက်စားစရာမလိုပဲ ညနေစားစရိတ်ပါငြိမ်းပါသေးတယ် …. ။ နောက်ပြီး …. အဆောင်မှာ ဖောဖောသီသီ မသုံးရတဲ့ရေ …. ရေသန့်စက်ထပ်ထားပေးတဲ့ စက်ရုံတွေမှာ သောက်လို့ ချိုးလို့ ရနေပြီလေ …. ။ အချိန်ပိုဆင်းတိုင်း အလုပ်နဲ့လက် မပြတ်လုပ်နေရတယ် မထင်ပါနဲ့ …. မဟုတ်ပါဘူး … အချိန်ပို ပိုညဉ့်နက်လေ …သူတို့က ပိုပျော်လေပါပဲ …. ။ စက်ရုံပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေ စောင့်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့ အနေထားမှာ အလုပ်သမား အချင်းချင်း ပြန်အုပ်ချုပ်ရချိန် …. တစ်ရေးတစ်မောတောင် အိပ်စက်ကြပါသေးတယ် …. ။ ဒါက သူတို့ရတဲ့ အခွင့်ရေးပါ …။ မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခွင့်ယူပြီး ပြန်တာကလွဲလို့ …. သတ်မှတ်ချိန်အလုပ်ဆင်းလျှင် ကားခမကုန်ပဲ ဖယ်ရီစီး အိမ်ပြန်ရောက်နိုင်ပါသေးတယ် …. ။ ဖယ်ရီမစီးပဲ အိမ်နီးလို့ လမ်းလျှောက်ပြန်အုံးတော့… ကားမစီးတဲ့အတွက် ကားခကို လစာထုတ်တဲ့အခါ ရက်တွက်နဲ့ ပေါင်းပေးပါသေးတယ် … ။ နယ်မှ လာသူတွေအတွက် စက်ရုံမှာ ဆင်းနေရတဲ့ အချိန်က တွက်ခြေကိုက်ပါတယ် …. ။ ထုတ်လုပ်မှု လိုအပ်ချိန် အချိန်ပို ညဘက်ထိဆင်းရပါတယ် …အဲ့လို အခါမျိုးမှာ သူမတို့ ပိုပြီးတွက်ခြေကိုက်ပါတယ် …. ညစာ ထမင်းကျွေးတာအပြင် ….. ရေချိုးတာမျိုး … တချို့ဆို ဖြိးလိမ်းပြင်ဆင်တာမျိုး …. အိမ်ပြန်ချိန်သန်းခေါင်နီးပါးကြောင့် အိမ်မပြန်တော့ပဲ စက်ရုံမှာ အိပ်စက်အနားယူလို့ရတာမျိုးနဲ့ … စက်ရုံမှာ အိပ်တဲ့လူတွေကို နောက်နေ့ မနက်စာထမင်းပါကျွေးတဲ့အခါ … သူတို့အတွက် … ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပါတယ် …. ရည်းစားသညာနဲ့အပြင်ထွက်မတွေ့ရတာကလွဲလျှင် အရာရာ အဆင်ပြေပါတယ် … ။ အချိန်ပို မခေါ်ပဲ စောစောပြန်လွှတ်တဲ့ရက်တွေများတဲ့ လဆိုလျှင်တောင် ၀င်ငွေသိသိသာသာလျှော့နေတာကြောင့် မျက်နှာမကောင်းကြပါဘူး …. ။
ဗျို့သဂျီးရေ… ဘာလို့ စာလုံးတွေကြီးနေပါလိမ့် … တကယ့်ကို စိတ်ပိန်တယ် … ပြန်ပြင်ပေးပါဦး ဘယ်နားကပြင်ရမှန်း မတွေ့လို့ …. ကျေးဇူးပါ
အီတုန်းရေ- ဘလက်ချောနဲ့ အပြိုင် (ကျောင်းတုန်းက စာစီစာကုံး ရေးရင် စာမျက်နှာမြန်မြန်ပြည့်အောင် လုပ်သလိုများ) လုပ်ထားတာလားလို့ ;)
ကြည့်ရတာ ဒီပို့ စ် တိုက်ပင်းနေတုန်းက
“သေးသေးလေးဘဲလား ကြီးကြီးလား ” သီချင်း ဖွင့်ထားတယ် မှတ်ဒယ်
စားလုံးတွေ ပြူးပြူးကို လန် နေတာပဲ.. အဟိ.. ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ..
Edit page မှာ Html ဘက်အခြမ်း ၀င်ပြီးတော့ အပို ကုတ်တွေ ဖျက်ပလိုက် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ရုံးဆင်းခါနီးဆိုတော့ … သဂျီးကိုပဲ အလုပ်ပေးခဲ့တယ်လေ .. ဟီးဟီး … ပြင်နေလျှင် … ဖယ်ရီကျန်ခဲ့မှာမို့ … မပြင်တော့ပဲ ထားခဲ့လိုက်တာ ဟီး
အတုန် ရေ ၊ နင့် ပို့ စ်ကို နင့် အချစ်တော်ဒွေ က ဝိုင်း အားပေးထားကြတယ် ထင်ပါရဲ့ 
ဟဲဟဲ … အလင်းကြောက်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့ … ဟီးဟီး … ဟား ဟား .. ဟိုးဟိုး .. ဟူဟူး …
ဟီးး အဝေကြီးကနေလှမ်းဖတ်လို့ရတယ်…။ မှီတယ် အိတုန်ရေ့……. စာလုံးတွေကိုပြောတာ
ကောင်းတယ်အိတုန်ရေ မျက်မှန် ဘေးချထားလိုက်တယ်
ပိုင်ရှင်အစစ်က ကိုရီးယားလူမျိုးပါ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသား တစ်ယောက် အမည်ခံထားပါတယ် … ။
အုပ်ချုပ်သူ ဒါရိုက်တာ အပိုင်းကတော့ မြန်မာ ပါ … general manager နဲ့ production manager ကတော့ ကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်ပြီး … ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် နဲ့ စက်ပြင်တွေကိုတော့ အင်ဒိုနီးရှားတွေခေါ်ထားပါတယ် … ။
ကျေးဇူးနော် …. စက်ရုံက လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ..။
သူတို့ကြားမှာ ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးပါ …။ သူတို့နဲ့ရော စကားပြောဖြစ်ရဲ့လား …။
လေးဖက်ရေ … စကားပြောဖူးတာတင်မကဘူး .. .နေ့စဉ် တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံနေရပါတယ် … ။ ကျွန်မတို့ စက်ရုံ သုံးရုံမှာ တစ်ရုံကို အနည်းဆုံး အလုပ်သမား နှစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ် … ။ သူတို့နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း အရောဝတ၀င်ရှိပါတယ် … ။ သူတို့ ရဲ့ အသုံးစရိတ် ချွေတာနိုင်ပုံကိုလည်း …. တအံ့တသြ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် …. ။ တာဝန်ယူတတ်မှုလေးတော့ နည်းနည်း အားနည်းနေသေးတယ် ….. ဒါကလည်း သူတို့ပိုင် အလုပ်မဟုတ်တာကြောင့် ပါ … ။
etone ရေ စက်ရုံ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အကြောင်းလေးတွေ
ရေးပြတာ တကယ်ကောင်းပါတယ် နွယ်ပင်တို့လို ဒီဘက်နဲ့
သိပ်မသိတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ဗဟုသုတ တစ်မျိုးပါပဲ ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် etone ပိုစ့်ကို အားပေးလူတစ်ယောက်တော့
ရှိမယ်ထင်တယ် ရဲရဲကို နီလိုပါလား …..
အင်း ဟုတ်ပါ့ အစ်မနွယ်ပင်ရေ … မီးနီပြပြီး အားပေးထားတယ် ဟဲဟဲ …
စာလုံးတွေ ကြီးတော့လည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ သိပ်အားမစိုက်ရဘူးပေါ့….
ဒီလို မျိုး ဘ၀လေးတွေ အဆင်ပြေတာ ကြားရတော့လည်း ၀မ်းသာစရာပါပဲ……
ဆက်အုန်းမယ် ဆိုတော့ စောင့်ဖတ်အုန်းမယ်…
ကြီးလိုက်တဲ့ စာလုံးကြီးတွေ။ ဖတ်ကတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
တချို့သတင်းတွေထဲဖတ်ရတော့ စက်ရုံမှာ အလုပ်သ္မားတွေ ဆန္ဒပြတာဘာညာကြားရလို့
ဘာတွေက ဘယ်လိုရှိတတ်လဲဆိုတာ အစ်မပြောပါဦး
ညီမ ပန်ပန်ရေ .. စက်ရုံမှာ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ တကယ်လိုအပ်လို့တောင်းဆိုတာထက် …. ဝေးလား ၀ါးလား … တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ ခဏခဏ အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက် အစ်မသိခဲ့ရတယ် … ။ တစ်ခါတစ်လေ … သူတို့ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုပြီး အချင်းချင်းကြားနေတာတွေရှိတယ် .. ဒါပေမယ့် … လူမညီလို့… မဖြစ်ပဲ ပျက်သွားတာတွေလည်း ကြားဖူးတယ် … ။ လုပ်ခ လစာဆိုတာကတော့ … လူတိုင်း တိုးလိုချင်ကြတာပါပဲ … အစ်မတို့လည်း ရမယ်ဆိုလျှင် လိုချင်တာပေါ့လေ … ဒါပေမယ့် … ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပမာဏနဲ့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းတာ တန်ရဲ့လားဆိုတာတော့ သိရမှာပေါ့နော် …. ။ အလုပ်ချင်းအတူတူ တခြားစက်ရုံတွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့အခါ .. အ စ်မတို့ ပေးတဲ့ လစာက ယှဉ်ကြည့်တောင် ပိုပါသေးတယ် … ။ အလုပ်ဝင်တာမှ တစ်လမပြည့်သေးဘူး .. လစာ တိုးတောင်းချင်တယ်ဆိုတာတွေကလည်း ရှိသေးတယ်လေ … လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပါပဲ … ။ သူတို့ကို အိုဗာတိုင်းမ် ဆင်းတဲ့အခါ … ညနေ 8နာရီအထိဆို ပေါင်မုန့်ကျွေးတယ် … good morning က ထုတ်တဲ့ ပေါင်မုန့်လေ … အဲ့ဒါမစားချင်တဲ့လူ .. ပိုက်ဆံယူမယ်ဆိုလည်း ပေးတယ် … ။ အခုနောက်ပိုင်း .. အတော်လေးကို လိုက်လျှောပေးထားပါတယ် …. ဆူဆူပူပူ ဆန္ဒပြမယ် ဘာညာဆိုလျှင်လည်း … အလုပ်ပျက်လို့လေ …. ။ ဒုတိယပိုင်းကျလျှင် အဲ့ဒါတွေပါပါဦးမယ် … ။ စောင့်ဖတ်ပါဦးနော် …. ။
ိအချိန်ပိုဆင်းရရင် ၀န်ထမ်းတွေကို တစ်ခုခုကျွေးတာတော့ တကယ်ကောင်းတာ
လူတစ်ယောက်က တနေကုန်အလုပ်လုပ်ပြီးရင် စွမ်းအင်ကကျလာပြီလေ
အိမ်မှာ၊ အပြင်မှာ ပိုက်ပိုက်ရှိရင် ၀ယ်စားလို့ရပေမယ့် အလုပ်ထဲကျ မလွယ်တော့ဘူး
အလုပ်သမားလည်း ကောင်းတယ်၊ အလုပ်ရှင်ဖက်ကလည်းကြည့်တော့ ကောင်းတယ်
အဟင့် ခေါင်းစဉ်က တစ်မျိုးပဲ
လူတိုင်းကတော့ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက ကြည့်ကြတာပဲလေ
ဥပမာ – ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဓာတ်ပုံ ဆိုပါတော့
တစ်ချို့က ပန်းတွေရဲ့အလှကို အရင်မြင်မယ်
တစ်ချို့က body structure
အင်း……. တစ်ချို့ က………..
ဟုတ်ပါတယ် … လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အတွေးတွေရှိပါတယ် ..၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် … ခေါင်းစဉ်လေးက … ပထမပိုင်းမှာ သိပ်မသက်ဆိုင်ပေမယ့်.. တတိယပိုင်းမှာ သက်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ … ညီမနီကီတာရဲ့ စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေပြီး … သင်တန်းတက်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းလို အဖြစ်ပျက်လေးတွေပါမှာမို့လို့ပါပဲ … ။
စာအရေးအသားနဲ့လေယူလေသိမ်းက ကြေးမှုံနဲ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွေထဲက
နိုင်ငံတော်ဝံဂျီးမှ ရေဘေးဒုက္ခသည်ဒွေဂို သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးဒါကို
အယ်ဒီတာဂရေးပြဒါဂို ဖတ်ရသလို ခံဇားရဘာဒယ် ဒေါက်တာ
ဆက်လက်ဖော်ပြဘာ ဒေါက်တာ မျှော်လင့်နေဘာမယ် ဒေါက်တာ
ဘာဂို မမှီပီး ဘာဂိုမလှမ်းနဲ့ ဆိုဒါ ( ဝီစကီဒွင်ရောသော soda မဟုတ်ဘာ )
( ဒေါက်တာကို တတ်နိုင်သမျှ ဘိုလိုပီအောင်ပြောသည် ( တာ ) ကို လေသံအနည်းငယ်နှိမ့်ပြောသည် )
စက်ရုံ တွင်း ဓါတ်ပုံတွေ ပါ့ဘလစ်ခ်ျမဖြစ်ချင်လို့ … ကြေးနန်းရိုက်ပြီး အပ်ဒိတ်မဖြစ်တော့တဲ့… စက်ရုံရဲ့ ၀က်ဖ်ဆိုက်လိပ်စာ ပို့ပေးလိုက်မယ် … ။ ….
ဒီမယ် အဘပု ….အစိုးရကို ယောင်ဝါးဝါး ဖားစရာ ဘာကိစ္စမှမရှိသလို စက်ရုံပိုင်းကိုလည်း ဖားစရာဘာကိစ္စမှမရှိဘူး … တန်ရာတန်ကြေးရလို့ … အလုပ်လုပ်တယ် … လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ … လူမသိသေးတာတွေပြောပြတယ် ဒီလောက်ပဲ … ။ သေသေချာချာ ထဲထဲဝင်ဝင်သိချင်လျှင် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ လာလော့လာ …. ဒါဘဲ ။
ပထမ စာလုံးကြီးတွေကိုမသိသေးဘူးနဲတူတယ် ဗျ
လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံတွေကတော့ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင် လိုဖြစ်နေတယ်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့.. ဒေါ်အီးဒုံးကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့တော်မှာ ကျင်းပမဲ့ အိုင်အယ်လ်အို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်အစည်းအဝေးကို အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စေလွှတ်ဖို့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက တခဲနက် ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ သံမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန်မှ အတည်ပြုလိုက်သည်။
လူအမျိုးမျိုး ဘ၀အထွေထွေ ပဲနော်။ ကိုယ်မသိရသေးတာမို့ ဗဟုသုတရပါတယ်။ တုံပို့စ် တခုလုံး ရဲရဲနီနေပါလား။ ရွာသူလား၊ ရွာသားလား နှောက်ယှက်နေပြီ။ ကွင်းပိုင်၊ ရွာပိုင်တွေကို ပသရတော့မယ် ထင်ပါ့။
etone ကို အားပေးတဲ့သူ များတယ်လား …. ရဲရဲကိုတောက်နေတာပဲ …
လုပ်ချင်တာတွေလည်း လုပ်ကြပါစေကွယ် .. ဟဲဟဲ …